सार्क सम्मेलन र नरेन्द्र मोदीको प्रभाव – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
सार्क सम्मेलन र नरेन्द्र मोदीको प्रभाव
२०७१ मंसिर ८, सोमबार ०३:०८ गते
शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मेलन’ भन्ने नाराका साथ यसपटकको १८औँ सार्क सम्मेलन यही मंसिर १० र ११ गते काठमाडौँमा सम्पन्न हुँदैछ । काठमाडौँ यतिबेला १८औँ सार्क शिखर सम्मेलनका कारण भव्य र रंगीन बनेको छ । सरकार र मातहतका निकाय हतारहतार सार्क सम्मेलनको तयारीमा लागिपरेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका साँच्चै रहरलाग्दो बनेको छ । भौतिक रुपमा यति रंगीन बनेको सार्क यसपटक पनि मुद्दामा भने कमजोर नै देखिएको छ । झन्डै ३० वर्षको अवधिमा लिनुपर्ने गति सार्कले लिन सकिरहेको छैन । अझैसम्म पनि एउटा सम्मेलनले उठाएका मुद्दा अर्को सम्मेलनमा पनि दोहोरिएका छन् ।
आयोजक राष्ट्रको हिसाबले हाम्रो देश यतिखेर सार्क सम्मेलनको सँघारमा उभिएको छ । यसपटकको सार्क सम्मेलन पनि अघिल्लो सम्मेलनझैँ आतंकवादविरूद्धको लडाइँमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्नको बहस र छलफलमा केन्द्रित हुने निश्चितप्रायः छ । सन् १९८५ डिसेम्बर ८ का दिन स्थापना भएको सार्कका सुरूवाती दिनमा नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स र पाकिस्तान गरी सात राष्ट्र सदस्य थिए । अफगानिस्तानले सन् २००७ मा मात्र सार्क राष्ट्रको सदस्यता पाएको थियो । सार्कमा अस्ट्रेलिया, चीन, युरोपेली संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, मोरिसस, म्यानमार र अमेरिकालगायत देश पर्यवेक्षकका रुपमा रहेका छन् । सार्कका सुरूवाती दिनहरु हेर्ने हो भने सार्कको गठन हुनुमा नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र बंगलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति रहमानको भूमिका मुख्य छ । नेपालले आफ्नो जलस्रोतको दक्षिण एसियामा सही उपयोग गर्नका लागि र बंगलादेशका राष्ट्रपतिले व्यापारिक दृष्टिले सार्क बनाउन आवश्यक छ भनेर छलफल अगाडि बढाएसँगै सार्क निर्माणका लागि आवश्यक कदमहरु अगाडि बढेका थिए ।
सुरूवातका दिनहरुमा सार्कको कल्पना स–साना देशमात्र जोडिने भन्ने खालको रहेको बुझिन्छ । सुरूवाती छलफलका क्रममा भारत स्वयं पनि सार्क गठनमा त्यति उत्साहित नरहेको बुझिन्छ, यद्यपि अहिले सार्कमा बढी प्रभाव नै भारतको रहेको छ । सार्कले उठाएका मुद्दा सफल वा असफल हुनुमा भारतको ठूलो हात रहने गरेको छ । अहिले १८औँ सार्क सम्मेलनको मिति जति नजिकिँदै गएको छ, त्यति नै भारत र त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चर्चा बढ्दै गइरहेको छ । सार्क सम्मेलनका लागि नेपाल आउनुपूर्व नै मोदीको नेपाल भ्रमण भैसकेको छ । अबको भ्रमण मोदीको दोस्रो नेपाल भ्रमण हुँदैछ ।
पहिलोपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी भारत फिर्ता भएको तीन–चार महिना बितिसक्यो र पनि पहिलो भ्रमणको चर्चा, बहस र छलफल अझै सेलाउन पाएको थिएन कि लगत्तै दोस्रो भ्रमणको चर्चा सुरू भैसक्यो । उनै मोदीको दोस्रो भ्रमणलाई लिएर सर्वसाधारणदेखि उच्चपदस्थसम्म विभिन्न तह र तप्कामा बहस र तर्क सुरू भैसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो भ्रमणलाई लिएर नेपाल र नेपालबाहिर पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुवैथरी बहस र छलफल चलेका थिए । चारदिने व्यस्त तालिकाबीच हुन लागेको यसपटकको मोदी भ्रमण अघिल्लो भ्रमणभन्दा पनि बहुअपेक्षित, बहुचर्चित र ऐतिहासिक हुने ठानिएको छ । कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, दुई देशीय सद्भावको मूल्यमान्यताबाट यसपटकको भ्रमण उपलब्धिपूर्ण हुने कुरामा धेरैको विश्वास रहेको छ ।
मोदीको अघिल्लो नेपाल भ्रमणबाट धेरैमा आशा र उत्साह पलाएको छ । धेरैलाई आशा छ, मोदीले यसपटकको सार्क शिखर सम्मेलनबाट केही नयाँ सन्देश दिनेछन् । सार्क मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुले उनबाट के चाहेका छन् भन्ने विषयमा उनी जानकार नै छन् । उनका आलोचकहरुले भन्ने गरेको एसिया क्षेत्रमा मोदी आफ्नो प्रभाव पैmलाउन चाहन्छन् भन्ने कुराको कसीका रुपमा पनि यो सम्मेलनलाई हेर्न सकिन्छ । सार्कका सदस्य राष्ट्रहरुमा उनको कस्तो प्रभाव देखिन्छ, त्यसबाट पनि पछिल्ला धेरै कुराहरुको अनुमान लगाउन सकिन्छ । मोदीले दक्षिण एसियामा मात्र नभई पूरै एसियामा नै आफ्नो प्रभाव छाड्न कति सफल वा असफल होलान्, त्यसको संकेत यस सम्मेलनबाट अवश्य पनि देखिने छ ।
मोदीले यसपटकको भ्रमणलाई सार्कको सहभागितामा मात्र सीमित नराखी धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक बनाउन पनि चाहेको बुझिन्छ । देवी सीताको जन्मभूमि जनकपुर र गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीका साथै मुक्तिनाथको समेत भ्रमण तय गर्नुबाट मोदीले आफ्नो सार्क सम्मेलनको भ्रमणलाई सम्मेलनमा मात्र सीमित नराखी धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक बनाउन चाहेको सन्देश दिन खोेजेका छन् । अघिल्लो भ्रमणका क्रममा नै नेपालीहरुको भारतविरोधी मानसिकतालाई परिवर्तन गराउन सफल मानिएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी यसपटकको नेपाल भ्रमणमा कुन कुरामा छाप छोड्न सफल होलान्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले विश्व नै एसियातिर मोडिएको यो अवस्थामा भारतले त्यसको केन्द्र आफूलाई बनाउनेतिर लागेको प्रस्टै देखिन्छ । एसियाभित्र हुने शक्ति–सन्तुलन र शक्ति–संघर्षमा सार्कमा पर्ने प्रभावले मह¤वपूर्ण हिस्सा ओगट्छ । कुनै पनि राष्ट्र जहाँ पुग्दा पनि आफ्नो प्रभाव छाड्ने मोदीले सार्क सम्मेलनमा जम्मा हुने सदस्य र पर्यवेक्षक गरी १९ देशका बीचमा कस्तो प्रभाव छाड्न सक्लान्, त्यसबाटै मोदीको प्रभाव कति छ, त्यसको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । चीनसँग सिमाना जोडिएको देशका जनताको मानसिकता भारतप्रति नरम बनाउने रणनीतिको सफल रुपमा नेपाल र भुटानमा अभ्यास गरिसकेका मोदीको अबको रणनीति भारतलाई नयाँ शक्तिराष्ट्रका रुपमा अझ बलियो बनाई एसियाकै शक्तिराष्ट्र बनाउने हो । रणनीतिअनुसार मोदी कति सफल होलान् वा असफल, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
अघिल्ला सम्मेलनहरुमा झैँ यस वर्ष पनि सार्कले साझा समस्याका रुपमा आतंकवाद, महिला हिंसा, सीमापार सुरक्षालगायतका मुद्दालाई लिने छ । र, मुख्य रुपमा नेपालले सार्कका सदस्य राष्ट्रहरुमा पढाएको ३१ बँुदे ड्राफ्टमा विगतको प्रतिवेदनको समीक्षा, गरिबी निवारण, कृषि तथा ग्रामीण विकास, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य र जनसंख्यालगायतका विषयहरुमा स्वीकृत सहयोगका क्षेत्रहरु सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । अचम्म त के छ भने सार्क मुलुकभित्रै पनि एउटा देशको अर्कोमा र अर्को देशको अर्कोमा अझैसम्म पनि राजदूतावास नै छैन । सार्क राष्ट्रभित्र अन्तरदेशीय राजधानी राजनीतिक हिसाबले जोडिनु पर्ने हो कि होइन ? अहिले नेपालको भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानमा राजदूतावास नै छैन र उनीहरुको नेपालमा पनि छैन ।
सार्कले सुरूवाती दिनमा कल्पना गरेको अन्तरदेशीय सम्बन्ध यस्तो खालको थिएन र होइन । बुद्ध जन्माएको देश नेपालले भारतबाहेक अन्य देशसँग सीधा शान्ति संवाद गर्न पनि धक मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना कसरी हुन गयो ? लुम्बिनी र गया अनि पशुपतिनाथ र काशीका बीचमा सीधा सम्पर्क हुनुपर्ने हो कि होइन ? आगामी दिनमा सार्कलाई कति अगाडि बढाउने हो, त्यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हातमा
छ । सार्कको मुख्य समस्या भनेको नै भारत र पाकिस्तानबीचको
द्वन्द्व हो ।